HAMAKY AMIN'NY TENY Acholi Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Aukan Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Baoulé Bashkir Bassa (Cameroun) Batak (Karo) Batak (Toba) Bengali Biak Bichlamar Bicol Boligara Boulou Catalan Cebuano Chichewa Chin (Hakha) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuuk Cinghalais Cinyanja Dangme Danoà Digor Douala Drehu Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Fitenim-paritra Alemà Fon Frantsay Ga Galoà Garifuna Gitonga Goujrati Goun Grika Groenlandey Guarani Géorgien Haoussa Hebreo Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (Fotsy) Holandey Hongroà Iban Ibanag Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Javaney Kabiyè Kambôdzianina Kannada Kantôney Nentim-paharazana Karen (S'gaw) Kazakh Kekchi Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Koreanina Kreôla Maorisianina Kreôla any Beliza Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Kroaty Kurde Kurmanji (Caucase) Kurde Kurmanji (Sirilika) Kwangali Kwanyama Letonianina Lhukonzo Lingala Litoanianina Luganda Lunda Luo Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mam Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Mapudungun Marathe Marshall Masedonianina Maya Mazateky (Huautla) Mbunda Mizo Mongol Mooré Myama Nahuatl (Afovoany) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Puebla Avaratra) Navajo Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngangela Nias Niue Norvezianina Nzema Népali Oromo Ossète Otetela Ourdou Ouzbek Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Ponape Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Rarotonga Romanianina Ronga Rosianina Runyankore Rutoro Samoanina Sango Saramaccan Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Afrika Atsimo) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Silozi Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Swati Tagalog Tahisianina Tailandey Tamoul Tarasque Tatar Tchouvache Tenin’ny Tanana Alemà Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Espaniola Tenin’ny Tanana Hongroà Tenin’ny Tanana Indianina Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Japoney Tenin’ny Tanana Kolombianina Tenin’ny Tanana Koreanina Tenin’ny Tanana Meksikanina Tenin’ny Tanana Poloney Tenin’ny Tanana Rosianina Tenin’ny Tanana Silianina Tenin’ny Tanana Venezoelianina Tenin’ny Tanan’ny avy any Cuba Tenin’ny Tanan’ny avy any Ekoatera Tenin’ny Tanan’ny avy any Québec Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tlapanèque Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tseky Tshiluba Tshwa Tsonga Tuvalu Twi Tzotzil Télougou Umbundu Urhobo Uruund Venda Vietnamianina Wallis Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yap Yorobà Zandé Zapoteky (Andilan-tany) Zapoteky (Lachiguiri) Zoloa tzeltal Éwé
“Niteny tamiko ny vadiko hoe handeha, hono, izy fa nahita vehivavy tanora kokoa. Tsy te ho velona intsony aho tamin’izay. Tsy rariny ilay izy raha jerena ny zavatra rehetra nataoko ho an’azy hatramin’izay.”—Maria, Espaina.
“Hoatran’ny hoe nisy banga tato anatiko, rehefa nandao ahy tampoka ny vadiko. Rava ny nofinay, ny zavatra nantenainay sy noeritreretinay hatao. Nisy fotoana aho nieritreritra hoe efa tsy naninona intsony, nefa avy eo kivy be indray.”—Bill, Espaina.
MAFY BE ny mahazo ny olona iray rehefa nijangajanga ny vadiny. Misy ihany aloha mahavita mamela ny vadiny sy mifandray tsara aminy indray. * Na rava anefa ilay tokantrano na tsia, dia mijaly be foana ny olona iray rehefa nivadika taminy ny vadiny. Inona àry no hanampy azy?
ANDININ-TENY AFAKA MANAMPY
Betsaka no mahita hoe tena mampahery azy ireo ny Baiboly. Nianaran’izy ireo tao hoe hitan’Andriamanitra ny ranomasony sy ny fahoriany.—Malakia 2:13-16.
“Rehefa nihabetsaka ny tebiteby tato anatiko, dia ny fampiononanao no nanafosafo ahy.”—Salamo 94:19.
Hoy i Bill: “Rehefa mamaky an’io andinin-teny io aho, dia hoatran’ny hoe eo akaikiko eo i Jehovah. Manambitamby ahy hoatran’ny ataon’ny ray tsara fanahy izy, dia maivamaivana ny fahoriako.”
“Ny olona tsy mivadika no tsy hivadihanao.”—Salamo 18:25.
Nanitsakitsaka an’i Carmen ny vadiny, nandritra ny volana maromaro. Hoy izy: “Nivadika tamiko ny vadiko. Fantatro anefa hoe i Jehovah tsy hivadika amiko mihitsy. Tsy handao ahy mihitsy izy.”
“Aza manahy na amin’inona na amin’inona, fa amin’ny zava-drehetra, dia ampahafantaro an’Andriamanitra ny fangatahanareo, amin’ny alalan’ny vavaka sy ny fitalahoana. ... Ary ny fiadanan’Andriamanitra izay lehibe lavitra noho ny eritreritra rehetra no hiambina ny fonareo.”—Filipianina 4:6, 7.
Izao no nolazain’i Sasha: “Novakiko foana io andinin-teny io.” Hoy ihany izy: “Lasa nilamin-tsaina aho arakaraka ny niresahako tamin’Andriamanitra.”
Efa saika nilavo lefona daholo ireo olona voaresaka teo ireo. Natoky an’i Jehovah Andriamanitra anefa izy ireo. Nampahery azy ireo koa ny namaky ny Teniny. Hoy i Bill: “Hoatran’ny hoe efa potika tanteraka ny fiainako, nefa lasa nisy dikany indray. Soa ihany aho fa nanam-pinoana. Tsy nandao ahy mihitsy Andriamanitra, ‘na dia namakivaky lohasaha maizim-pito aza aho.’”—Salamo 23:4.
^ feh. 4 Inona no hanampy anao hanapa-kevitra hoe hamela ny vadinao na tsia? Jereo ilay andian-dahatsoratra ao amin’ny Mifohaza! 8 Mey 1999 hoe “Ahoana Raha Manitsakitsaka ny Vady?”
Misaintsaina andinin-teny mampahery.
Hoy i Bill: “Ny bokin’i Joba aloha no novakiko, dia avy eo ny Salamo. Notsipihiko izay andinin-teny nahakasika ahy. Hitako hoe nalahelo sy niady saina be hoatran’ahy koa ny olona voaresaka ao amin’ireo boky ireo.”
Mihaino mozika na mitendry zavamaneno.
Izao no nolazain’i Carmen: “Nihaino mozika aho rehefa tsy nahita tory. Nanampy ahy tsy ho kivy izany.” Nilaza koa i Daniel hoe: “Nianatra nitendry gitara aho. Nampilamina ny saiko ny feon’ilay izy.”
Mamboraka ny fihetseham-po amin’ny hafa.
Hoy i Daniel: “Lehilahy maromaro izahay no mpinamana. Niresaka ny zavatra tsapako tamin-dry zareo aho isan’andro, na dia tsy fanaoko aza izany taloha. Indraindray taratasy no nalefako. Tena nanampy ahy izany.” Hoy koa i Sasha: “Nanampy be ny fianakaviako. Teo foana i Neny rehefa nila niresaka aho. I Dada indray nanome toky hoe tena tian-dry zareo aho. Nampiany koa aho mba hiarina tsikelikely.”
Mivavaka tsy tapaka.
Hoy i Carmen: “Nivavaka foana aho. Tsapako hoe tsy nandao ahy mihitsy Andriamanitra, fa nihaino ahy sady nanampy ahy. Lasa akaiky kokoa azy aho tamin’ireny fotoan-tsarotra ireny.”
Mbola Misy Dikany ve ny Fiainana Raha Nivadika Taminao ny Vadinao?